OSolwazi uKalpana Hiralal kanye noGoolam Vahed bathula izifundo ekhempasini i-Westville.
Izifundiswa zase-UKZN Zithula Izifundo ngeZinkinga Eziphathelene Nomphakathi
Othisha beKolishi Lezesintu, Osolwazi Goolam Vahed kanye noKalpana Hiralal, basanda kwethula izifundo zabo e-Senate Chamber, eKhempasini i-Westville.
Isifundo sika Vahed esisihloko sithi On the margins: Writing History at a Time of Profound Political Change besibuka kabanzi izihloko zomsebenzi wakhe weshuminyaka emithathu eyedlule, kubheka kokubili okubambekayo okuqukethwe kanye nenjulalwazi nendlelakusebenza esetshenzisiwe.
Imibhalo yakhe, echaza, yenzekile nakuba kunezinguquko ezinkulu kwezepolitiki eNingizimu Afrika, okubonakale esifundweni sakhe ekhuluma ngolwazi lwakhe ngamanyuvesi aseNingizimu Afrika kanye nawaphesheya, njengomfundi kanye nothisha. ‘Izazi zomlando zivame ukungazibandakanyi nezihloko abacwaninga ngazo. Kodwa ngithe mangibheka imibhalo yomsebenzi wami kanye nezifundiswa ezangikhuthaza, ngabona ukuthi lokhu angeke ngikwazi ukukugwema yingakho nesifundo kumele sifundwe, ukufingqa u-C. Wright Mills, njengesisekelo somlando wami, nakuba kunoguquko olunamandla kwezepolitiki eNingizimu Afrika,’ esho.
Ekhuluma ngalo mlando, ukhulume ngemibhalo yakhe ngabaseNdiya eNingizimu Africa, ama-Islams eNingizimu Afrika kanye nezepolitiki yezemidlalo, bebe bebhekane nokusungula indlelakwenza yocwaningo kanye nenjulalwazi. ‘Abanye babona lolu hlobo lokubhala umlando kufanele kusale emuva; empeleni ngikholwa ukuthi le ndlela inikeza umqondo obalulekile emphakathini obhekene nezinguquko ezinkulu kwezepolitiki njenge Ningizimu Afrika,’ kusho u-Vahed.
UHiralal ukhulume ngesihloko From the Margin to the Mainstream: Women and Gender in South African History lapho ehlole khona kabanzi izinkulomompikiswano ngomlando wobulili kanye nokuphathelene nobulili eNingizimu Afrika.
‘Umlando wabesifazane usuguquke waba umlando wobulili, ubonakala ukhula futhi uthuthukisa izifundo ngomlando. Kumashuminyaka amibili edlule, sekube nezindlela ezahlukene ngaphakathi esikolweni kusifundo kanye nokubaluleka kwemilando yabesifazane kanye neyobulili. Kwabakhona imibono eyayibaluleke kakhulu ngesifundo semilando yabesifazane eyayiletha uguquko ezindabeni zendabuko,’ esho.
Kodwa ke, uHiralal ukholwa ukuthi ziseningi izingxenye zomlando waseNingizimu Afrika ezidinga ukuhlaziywa ngokujulile amazwi ezobulili.
‘Imibhalo yesimanje ngabesifazane kanye nobulili ingathola imibono enamandla futhi ephoqayo emibhalweni ngemphakathi kanye namasiko asesikhathini esedlule. Umlando ophelele, njengendlela yokukhiqiza ulwazi, kumele kufake umlando omningi futhi obalulekile ngezobulili. Uma sibheka konke, kunikeza indlela eya phambili emlandweni yabantu yababengabalulekile kanye nababecindezelwe esifundweni esijwayelekile ngaphakathi kwemibono yase-Afrika,’ kusho u-Hiralal.
Kuhalaliselwe UDokotela Wezemizwa Wokuqala Onsundu e-UKZN
UKZN Rugby Students Fly the University, KZN and National Flags
Umsebenzi wase-UKZN Uhlomule Ngendondo ye-NRF
Sinethulela uMongameli Omusha Wenhlangano Yabafundi e-UKZN
UKZN HR Encourages Diversity and Inclusion Amongst Staff
Audiology Academics Fly UKZN Flag High at Historic Congress
Legendary Surgeon Celebrated
Norwegian-UKZN Partnership to Internationalise Teacher Education
Young Civil Society at Forefront of Contemporary Politics
Clinical Anatomy Academic Awarded UCDP Mobility Grant
Exhibition on Human Rights for People Living with Mental Illness
Fine Arts Student to Showcase Innovative Non-Toxic Etching Practices
UKZN and Ghanaian Legal Fraternity Discuss Possibility of Distance Learning Initiative
Psychology Students Visit Healing Village
Snake Awareness Session at Howard College